सरकारलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो–प्रदेश प्रमुख खोई ? « Ramechhap News
सरकारलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो–प्रदेश प्रमुख खोई ?
निर्वाचन आयोगले सरकारलाई प्रदेश सभाको प्रमुख तोक्न ढिलाई गरकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले तत्काल प्रदेशसभाको प्रमुख तोक्न आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा भई निर्वाचन कार्य तालिकासमेत प्रकाशित भइसकेको हुनाले प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको नतिजा घोषणा गरी सात दिनभित्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउनु पर्ने भएकाले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको नतिजा प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकपछि सरकारसँग नियुक्तिको लागि पुनः आग्रह गरेको हो ।